Marka ay timaado kulamada, waxaa jira ururinta weyn laga heli karaa guriga qalab aad u badan sida telefoonada android, kiniiniga, laptop iyo kuwa kale. Halka, kuwa jecel tijaabinayaan ciyaar cusub dhowr maalmood ka dib, kulan fara badan waxaa laga heli karaa internet. Kala duwan ee mawduucyada, naqshadeynta, jilayaal, hawlaha iyo qaababka isku mid, iyaga kala saaro in qaybaha kala duwan oo mid ka mid ah qaybahan waa " kulan toogashada ah ee Android ". Sidaas, halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah kulan toogashada in ay caan ka ah oo aan caadi ahayn oo loo eegin xaqiiqooyinka in sidoo kale ay yihiin kulan toogashada lacag la'aan ah Android ama ay la kharash ah oo labo ka mid ah dollars soo, tirada taageerayaasha sii kordhaya maalinba maalinta ka .
Platform: shuruud OS ugu yar waa Android 2.3 laakiin kala duwan leh qalabka.
Sii daayay on 15 May, ee sanadkan, kulankaan ayaa ku guuleystay qalbiyada dadka badan oo caalamka ah oo leh waxyaabo xiiso leh oo ay.
2. Major jaha
Platform: shuruud OS ugu yar waa Android 2.3.3 ama kor.
Waxaa jira nooc ka mid ah sheeko-line in kulan ciyaaryahan ayaa sidoo kale la filayaa in uu badbaadiyo saaxiibtiis ah oo ay mari ku ninjas, wakiilada qarsoodi ah ama dadka kale qaar ka mid ah, kuwaas oo oredered ee Madaxweynuhu in la dilo.
3. Dead kiciyaan 2
Platform: shuruud Yar ee OS waa Android 4 ama kor, kulankan
Kulankaan wanaag toogasho ku saabsan tahay badbaadinta adduunka toogasho ugu zombies ah. Mowduuca, naqshadeynta iyo saamaynta audio waa fiican.
4. dagaalanka Modern 4
Platform: shuruud OS Ugu Yar inuu ciyaaro kulankaan waa Android 2.3
Waa Gadzhiyev ah looga adkaan kulan dagaalka ee PC in la sameeyo garaaf hodan iyo waa ay fududahay in ciyaaro qalabka Android.
Platform: Android 2.3 ama kor u yihiin OS taageera kulankan.
Hel waayo-aragnimo ah oo quruxsan duurjoogta arrintan ciyaarta toogashada double-ul goofy. Dila undead ka costumed iyo dhibcaha ku guuleysto.
Price: $ 2.5 (Store Play Google)
Platform: shuruud OS ugu yar waa Android 2.3 ama kor.
Waa ciyaar Shooter aragga-safeeyey iyo farta-friendly keenaya in qofka toogashada saddexaad. Player Uu leeyahay si loo badbaadiyo amiirad ee munaaraddii laakiin sheekada oo dhan ayaa tijaabooyin iyo hawlo kala duwan oo ay ku dhamaystirka.
7. Sky Gamblers: tuugo Storm
Price: $ 2.99 (Store Play Google)
Platform: Game u baahan Android 4.1 iyo sidii OS gargaara.
Waa Air dagaal ciyaarta. Player Bam doonaa Xoolihiinnu cadowga iyo ilaaliyo magaalooyinka. Waxaa loo qorsheeyay in hab lagu siiyo ciyaaryahanka u dareento ee jawiga dhabta ah nolosha.
8. Diyaar Joogto Bang
Platform: Android 2.2 shuruud OS ugu yar.
Waa ciyaar fudud toogashada halkaasoo ciyaaryahanka uu leeyahay si ay u sameeyaan dhibcaha iyo aad u badan ka hor markii uu dhamaado, waayo, in hawl gaar ah. Iyadoo theme laakiin casri ah sharraxaadda ah oo gaboobay galbeedka, kulankaan si fudud waa cajiib.
9. Call of Duty: Kooxda Strike
Price: $ 7 (Store Play Google)
Platform: shuruud OS waa Android 4.0 iyo kor.
Waa doorasho kaamil ah oo kulan toogashada Android kuwa ciyaaro iyo waxay aaminsan yihiin ciyaarta toogashada in aan kaliya oo ku saabsan in uu ordo iyo qoriga laakiin sidoo kale wax badan ka sii badan.
10. Mass Saamaynta: Infiltrator
Platform: shuruud OS ugu yar waa Android 2.2 iyo kor.
Waa kulan kale oo rasaas ugu fiican. Buuxi hawlaha iyo abaalmarinta ku guuleysto. Naqshadeynta Brilliant, awoodaha la yaab leh, sheeko wanaagsan iyo wax ka badan, waxaa jira inay haleelaan dareenka ciyaaryahanka.
> Resource > Emulator > Games toogashada Adduunka ee Best u Android in aad ka ogaato